Google AdWords vs. SEO: Chii chiri nani?
Mhinduro yacho inonyanya kubva pane zvakaita bhizimisi rako. Usati wanyatsoongorora imwe nzira yekutengesa iri nani pakutevedza kwekutengesa uye motokari yebhizimisi rako - SEO kana Google AdWords, ngatitangei kutsanangura mazwi anotevera. Izvi zvichakubatsira kuwana kunzwisisa zviri nani iyo nzira ingashanda zvakanakisisa pakugadzira kwako.
Chii chakasiyana pakati peGoogle AdWords neSeO?
Kutsvaga injini yekugadzirisa inzira inyanzvi yemagadziro nemaitiro ekushandiswa kuwedzera nhamba yevashanyi kune imwe nzvimbo. SEO inoshandisa kushandiswa kwemaitiro anoreva kuti tishandise Google algorithm kuitira kuti ruzivo rwemunhu ruve nehupamhi hwepamusoro pajini yekutsvaga. Iyi nzira dzinosanganisira kushandisa mazwi anokosha, kubatanidza zvinyorwa kune mawebsite anovimbika kana zvimwe zviitiko zvakabatana uye kushandisa meta tsanangudzo dzakakodzera.
Google AdWords, zvakare, inoshandisa kushandiswa kubhadhara. Nenzira iyi, vadzidzisi vepaibhizimusi vanofanira kubhadhara injini yekutsvaga (zvisinei pasinei neGoogle, Yahoo kana Bing) kuti vaise zvinyorwa zvavo pamusoro peGoogle tsvakurudzo yekutsvaga. Inofanirawo kuonekwa kuti muridzi wepaiti anofanira kubhadhara nguva dzose kana munhu achitsinhanisa pachikwata chake.
Ngatifanane neGoogle AdWords ne SEO
. Chinhu chikuru pamusoro pe SEO ndechekuti inogona kutanga isina rusununguko sezvo pasina chikonzero chekubhadhara pamapurogiramu akawanda anokubatsira ne SEO techniques. Chinhu chimwe chete chaunofanira kuita ndechokuti nzira dze SEO dzipi dzinoshanda zvakanakisisa kune rako rekushandisa uye kuzvishandisa.
Zvisinei, kana bhizinesi rako richikurumidza, iwe unogona kusarudza mazamu eSeO, seSemalt, kuti uwedzere kuwedzera mapeji ako ewebhu kuitira kuti iwe ugone kugara mumutambo uye warova kupikisa. Makambani anonyanya kuwanikwa mune SEO nzvimbo uye ane zivo kubva pakuve achishanda munharaunda imwechete kwemakore anogona kupa bhizimusi rako kunyanya nekuedza kwaunoda.
Google AdWords ine mubhadharo-per-click types of scheme. Nechirongwa ichi, uyo achava nehumwe bhajeti yaachabhadhara nguva dzose kana munhu achitsinhanisa pachikwata. Nokudaro, ivo vanonyanya kushandisa vashandisi vamunogona kuwana, iwe unowedzera kubhadhara. Kunyange zvazvo zvingaratidzika sechinhu chinodhura kwauri pakutanga, hachisi iwe kana uchichienzanisa nekudhinda uye kubudiswa kwemagazini.
Nhamba yeVatariri uye Vanotungamirira
Paunotarisa kudzoka kwekutsvaga, iwe unofanira kutarisa nhamba inotungamirira yeGoogle AdWords ne SEO inogona kupa. Nzira mbiri idzi dzinogona kupa nhamba inoshamisa yevatariri. AdWords ruzivo, munyaya iyi, ndeyokuti inogona kuwana zvakawanda zvinotungamirira munguva pfupi. Zvisinei, kana tikaramba tichienda kwenguva yakareba kunyange zvakadaro, iwe uchaona kuti vanhu vachawedzera zvakawanda kune zvitsva zvekutsvaga kwehupenyu. Tsanangudzo yakajeka yechokwadi ndeyekuti kuongorora kwehupenyu ndizvo izvo vashandisi vari kutsvaga. Kuti uzvienzanise, AdWords ichakupa mutungamiri kana vatariri pakarepo, asi haisi yakasimba se SEO iyo inogona kukuwana iwe vatariri vakawanda pane imwe nguva yakawedzerwa.
Nokukurumidzira, AdWords ingasarudza zviri nani. Nokuda kweSEO zvingatora nguva yevashandisi kuona webhusaiti yako kuburikidza nemigumisiro yekutsvaga kwehupenyu. Kune AdWords kunyange zvakadaro, unogona kuwana mitsananguro kusvika pakarepo nokuti Google AdWords inogona kutsvaga sarudzo yako yakasarudzwa. SEO haisi kutarisa vanhu. Izvo SEO inogona kuita ndeye nechokwadi chokuti webhusaiti yako yakakosha uye zvaunoda kuti vateereri vazviwane.
Chii Chandinofanira Kusarudza: Google AdWords kana SEO?
Zvino sezvo iwe uchiziva zvikomborero zvega rega rekutengesera, zvingava nyore kwauri kuti uone kuti ndiani ari nani kune bhizinesi rako. Kana iwe uchiedza kuita kuti utungamirire nokukurumidza, ipapo AdWords ingadai iri sarudzo yakakwana kwauri. Zvisinei, kana iwe uchida kuti bhizinesi rako rive nekukura kwakasimba, iwe unofanirwa kutenga mari yekushandisa maitiro e SEO. Cherechedza, kuva nekutengesa nzira mbiri kunogona kubatsira chero bedzi iwe uchiisa zviratidzo zvekushanda kwako uye unoramba uchiyera kubudirira kwechiteshi chimwe nechimwe chekutengesa Source .